Sibonile amaklayenti amaningi eza kithi ngemuva kokulahlekelwa amathani emali eqhuba imikhankaso yawo yokukhokha ngokuchofoza ngakunye (PPC) eyedwa. Akukhona ukuthi abazange banake noma baphathe kahle ama-akhawunti, kungenxa nje yokuthi bebengazi ukuthi bangayithinta kanjani imiphumela yabo futhi bayithuthukise empeleni. Iningi labantu likholelwa ukuthi ukukhokha ngokuchofoza okukodwa kumane kuyimpi yokubhida futhi abaqapheli nokuthi, ngokwenza ngcono ikhwalithi yezikhangiso zabo, bangaba sezingeni eliphakeme kunelabathenga kakhulu! Ukuphathwa kwe-PPC kudinga ukunakwa okuningi nesipiliyoni uma ungathanda ukukusebenzisa ngokweqiniso, ugcine izindleko ziphansi, futhi uhambise amazinga akho okuguqulwa abe ngaphezulu!
Abantu abaku Pulpmedia ngibeke ndawonye le infographic echaza ubunzima be-Google Adwords, i-Adrank, nokuthi isikhangiso sakho singakhuphuka kanjani ngaphezulu.
Tags: i-google adranki-google adwordsGoogle +umabhebhana
Izinto ezi-3 ze-Run-DMC Zingifundise Ngemidiya Yezokuxhumana
Jan 5, 2012 ngo-1: 01 PM
Iyiphi idatha esetshenziselwa ukunquma ukuzethemba%?
Jan 5, 2012 ngo-4: 54 PM
Awuqinisekile ukuthi i-DisqueD1…. umbuzo omuhle wePulpMedia!
Feb 19, 2013 ngo-5: 59 AM
Ngicabanga ukuthi i- $ .01 inani eliphansi okufanele ulingeze kule fomula yokuthola izindleko ngqo ..
Mar 24, 2014 ku-9: 24 PM
Ngikhulume nezinkampani eziningi ze-PPC, kepha into ebaluleke kakhulu ongayenza emkhankasweni wakho wokumaketha amakhasi okufika. Izinkampani eziningi zikuthengisela into eyodwa eyi-1 enjengokwakhiwa kwewebhu, noma nje i-Google Adwords, noma ama-popups, noma nje ukuphinda uhlehlise okuthile. Lokhu kuyindida ngokuphelele ngoba ngenkathi into engu-1 ingenza umehluko emkhankasweni wokumaketha ozinzile, ayikho into eyodwa kuyinto yokwakha noma yokuqhekeka ekumaketheni okuku-inthanethi, udinga lonke iphakethe, bese ucija / ulungiselele ukusuka lapho. Imali engenayo yebhizinisi lami inyuke ngaphezu kuka-60% ezinyangeni ezimbili lapho ngithathe i-ejensi enhle eyenza okungaphezu nje kwe-PPC, kepha ngibuye namakhasi ami okufika, ukuphinda ngibheke emuva, izikhangiso ze-banner, njll. Empeleni, nginezinombolo zocingo zikaSimon lapha, ungakhuluma naye futhi. Vele umnike ucingo ku-302-401-4478.
Sep 24, 2015 ku-6: 59 AM
I-athikili enhle… ilusizo kakhulu ..